Ama-mushroom e-Oyster angenye yama-mushroom enhle kakhulu futhi anenzuzo. Ngokuthanda kwabo, azifani kakhulu nama-mushroom. Yingakho i-oyster mushroom ibhekwa njengefungus yonke, enezimfanelo ezinhle kakhulu. Inzuzo enkulu ye veshenok yinto elula yokulima kwabo. Ngenxa yalesi sizathu, abalimi abaningi nabalimi be-amateur bakhetha ukuhlakulela amakhowe. Phela, ukuqoqa amakhowe kungenziwa kalula kulo lonke unyaka, kuyilapho ujabulela umkhiqizo wemvelo, onomsoco futhi onomsoco. Ngendlela, ungakhula ama-oyster amakhowe kokubili futhi uthengiswe kalula futhi ekhaya.
Ukuze ukhule amakhowe ama-oyster ekhaya, udinga ukuthola i-mycelium ye-oyster mushroom ne-husk embewu yelanga.
Ama-mushroom e-oyster ekhaya: imithetho eyisisekelo.
Ukutshala izihlathi zezindlu kuvame ukwenza ngezindlela ezimbili: okubanzi (emibhedeni) nokujulile (ngaphakathi kwesikhala esivaliwe). Yiqiniso, esimweni sokuqala uzokwazi ukuzijabulisa ngokwama-mushroom ama-oyster izinyanga ezingaba ngu-5 kuphela, kodwa indlela yesibili yokukhulisa izithembiso ze-veshenok ozivuna unyaka wonke. Kwakuyindlela enamandla yokukhuza amakhowe esinqume ukukhuluma ngokuningiliziwe.
Amakhowe e-Oyster ekhaya: isigaba sokuqala.
Ngaphambi kokuba uqale ukuhlakulela i-veshenok ngqo ekhaya, kufanele uthole futhi uthenge i-mycelial oyster mushroom. Nje ngosizo lwale mycelium, noma kunalokho, ngesisekelo, futhi ukuhlwanyela kwenziwa, bese ukhula amakhowe. Ukudida i-mycelium kunzima kakhulu. Njengomthetho, ihluma ngotshani, futhi ingathengwa kwifomu yangaphambi kokuhlanganiswa. Lezi zingaba amaphakheji akhethekile amakhilogremu ambalwa ngesayizi.
Isinyathelo sesibili endleleni yokukhuphula i-veshenka kuyoba ukuthengwa kwezinhlamvu ze-sunktha. Kulokhu, i-husk yembewu isebenza njengomhlabathi lapho amakhowe azokhula khona futhi akhule. Kungcono ukuthenga i-husk esitshalweni esikhethekile lapho kusetshenziswa khona amafutha ketshezi.
Inqubo yokulungiselela "inhlabathi yokufakelwa".
Ngaphambi kokuhlwanyela amakhowe ama-oyster, ulungiselele ngokucophelela futhi ngenkuthalo inhlabathi emanzini wezinhlamvu ze-sunflower. Ukuze senze lokhu, sithatha i-husk bese siyibilisa emanzini abilayo, emva kwalokho siyasakaza futhi siyibeke phansi. Khona-ke sidinga ukuthatha iphakheji lamasayizi amakhulu futhi sinamathele kuso i-husk ehlile kakade. Khumbula ukuthi ungqimba wokuqala we-husk akufanele udlule ngamamitha angu-5. Manje singaphumelela ngokuphepha ku-mycelium, okudingeka siyiphule futhi siyeke kahle. Ngakho sikhiqiza ukuhlwanyela ama-mushroom, okwenziwa endaweni yesigcawu sokuqala samathanga. Ngemva kokuqeda ungqimba wokuqala, sibeka isendlalelo sesibili samathanga, sihlwanyela i-mycelium futhi senza okufanayo nesendlalelo sesithathu.
Ngendlela, i-mycelia ye-oyster amakhowe ngalinye iphakheji kufanele isetshenziswe, cishe, 250-300 amagremu. Kwiphakheji ngayinye kufanele ibe izingxenye ezinhlanu noma eziyisikhombisa ze-mycelium. Akunconywa ukuthi udlule le nombolo. Manje sisebenzisa intambo eqinile ukubopha iphakheji. Kungcono ukusebenzisa izintambo zekhron, ezisetshenziselwa ukuqinisa izicathulo.
Ngemva kokuthola ibhokisi eliqediwe, kufanele senze ubude obude emaceleni ephakheji. Ngenxa yalezi zici, i-oxygen edingekayo ekukhuleni izofika ku-mycelium. Ukuze ugweme ukuthungwa kwephakeji, kubalulekile ukusika izicucu ezingu-15-20.
Ngakho silungiselela inombolo edingekayo yamaphakheji, okungcono kakhulu afakwe endaweni enomanzi. Indawo enjalo ingasebenza njengengaphansi.
Ngemuva kwezinsuku ezingu-15-20 ekupakethe ungqimba lwe-moss obukhulu, futhi umbala wabo uzoba mhlophe. Amahlumela okuqala azovela emigodini yokusika esikhwameni. Lezi zihlahla zibizwa ngokuthi i-primordia. Lezi zitshalo zidinga umswakama kakhulu, kodwa akukhuthazwa ukuwahambisa ngamanzi. Kumele kuqinisekiswe ukuthi kunesimo esanele samanzi ekamelweni, kuphela lapho ukukhula komlimi wendawo kuzothela izithelo nemiphumela. Ngeviki nengxenye uyokwazi ukugcina amakhowe asekhulile asekhulile asekhulile ekhaya.
Khumbula ukuthi inqubo yokukhulisa ingane unogwaja ekhaya ilula futhi ingabizi!
Indlela yokugqoka izingubo eziphathekayo?
Umsebenzi we-autumn engadini
Amafrimu ngezandla zakho ezenziwe ngephepha nekhadibhodi
Izinto ezintsha ezenziwe ngezandla ezenziwe ngamabhodlela eplastiki engadini kanye nensimu enezandla zabo - isinyathelo ngesinyathelo sabaqalayo, nezincazelo zezithombe - I-master master class ekwenzeni ubuciko emabhodleleni epulasitiki
Ikhalenda elizayo noma Ikhalenda elilindile
IJam kusuka ethangeni (Kiev)
Ukupheka for dessert okumnandi kulungiselelwe ngokushesha
Ukukhipha isisu ngemuva kokukhulelwa kwesikhathi eside
Yeka ukuthi kuhle kangakanani ukuhlangabezana nomlingani womphefumulo?